polisy | Радоје Домановић
Tag Archive | polisy
Tsy ny zava-mahagaga no tsy ampy amin’ity tany midadasika ity, ary ny tanitsika hoy ny maro dia feno zava-mahatalanjona hany ka maro no tsy mahagaga intsony. Misy olona eto manana anjara toerana tena ambony kanefa tsy mba mieritreritra, ary ho tambin’izay, na mety ho antony hafa, dia nisy omby tsotra ira, mitovy amin’ny omby serbianina rehetra ihany, nanomboka naka saina. Andriamanitra mahalala ny zava-nitranga nahatonga ity biby ity ho sahy hiditra amin’izany tontolon’ny fieritreretana izany, indrindra nony nahafantarana fa any Serbia dia mety hitondra loza izany fieritreretana izany. Azo lazaina izany fa ity devoly kely ity, tao anatin’ny fahatokisany tafahoatra, dia tsy nihevitra fa tsy mitondra soa izany ataony izany ao amin’ny taniny. Tsy hahazoany voninahitra izany na dia kely varaventy aza. Kanefa mbola mistery hatrany ny nahatonga ity omby ity handinika kanefa izy tsy mpifidy akory, na mpanolo-tsaina, na governora, na voafidy ho mpisolo tena ny fikambanan’ny omby, na koa (raha efa nahazoazo taona izy) solombavam-bahoaka. Ary raha mba nanofy ho lasa ministra ao amin’ny tanin’ny omby hono ity farany, tokony ho fantany ihany anefa fa mifanohitra amin’izay no tokony hataony, tsy mieritreritra, toy ireny ministra andrarezina any amin’ny tany miadana noho ny antsika ireny. Eny e, inona rahateo moa no hiraharahiantsika ny nahatonga ity omby serbianina ity hanomboka zavatra efa nolaozanin’ny olona? Ary koa, mety nanomboka nieritreritra izy noho ny fahendrena izay efa ananany.
Karazan’omby inona ara izy ity? Ny omby tsotra, araka ny fampahafantaran’ny manampahaizana momba ny biby, dia manana loha, vatana sy rantsana, toy ny omby rehetra; mitarika sarety izy, mihinana bozaka, milelaka sira, mitsakotsako ary mitrena. Ny anarany dia Ilavenona.
Toy izao no niatombohany. Indray andro ny tompony nanisy zioga azy sy ilay namany, Ilaimainty, nampiakatra vatan-kazo nangalarina tao anaty sarety ary nitondra azy ireo tany an-tanàna hovarotana. Injay vao tafiditra ny tanàna izy ireo dia namidiny ny hazo ary nalany ny ziogan’Ilavenona sy Ilaimainty, nafatony tamin’ny rojo izy ireo ary nanipazany akofa, avy eo izy niditra trano fisotroana mba hiala hetaheta. Nisy fety tao an-tanàna tamin’izay fotoana izay, nisy lehilahy, vehivavy ary ankizy nivezivezy nanodidina. Ilaimainty, izay fantatry ny maro fa moana, tsy nijery mihitsy, fa variana nisakafo, nihinana nameno kibo, naka fahafinaretana nitrena, ary nitsotsotra sady nitsakotsako.Tsy nisy nahatsikaritra azy akory ireo olona rehetra nandalo. Natoritory teo izy teo am-pitsakoana, miadana ery (indrisy mantsy fa tsy mba olombelona izy na dia nanana izany fikasan’asa izany aza). Ilavenona kosa tsy nahahinana mihitsy. Ny masony manonofy sy ny endriny malahelo maneho fa mpisaina lavitra izy, ary manana fanahy malefaka. Vahoaka maro, serbianina, nandalo azy, nirehareha ny amin’ny lasany be voninahitra, ny anarany, ny tanindrazany, ary tsikaritra izany amin’ny fihetsiny hentitra sy ny fandehany. Voadinik’Ilavenona avokoa izany rehetra izany, ary toa voatsindrin’alahelo sy fahoriana mafy izany izy noho ny tsy rariny hitany, ary latsaka tampoka tanatin’ny fihetseham-po lalina dia lalina izy; nitrena tamin’alahelo izy, feno fahoriana, latsa-dranomaso. Ary tanatin’izany alahelo izany dia lasa fisainana izy:
— Inona ara no ireharehan’ny tompoko sy ireo mpiray tanindrazana serbianina aminy? Maninona izy ireo no avo loha ary manao fijery ambany feno avonavona ny toa ahy? Mirehareha ny amin’ny tanindrazany izy ireo, faly fa nitsiky taminy ny anjara ka teraka taty Serbia izy ireo. Izaho koa dia mba nateraky ny reniko teto Serbia, ary i Serbia dia tsy firenenko ihany fa an’ny raiko koa, sy ny razako rehetra, toy ny azy ireo, izahay rehetra dia samy avy tamin’ity tany ity ihany. Kanefa tsy mba misy aminay omby nahatsiaro manan-kaja ny amin’izany, ny hahafahanay mitondra enta-mavesatra eny am-piakarana ihany no hireharehanay; ary hatramin’izao, dia tsy mba nisy omby nilaza tamina omby alema hoe: “inona no tadiavinao amiko, izaho izay omby serbianina, ny tanindrazako dia ny tany serbianina, ny razambeko rehetra dia teraka teto, ary eto amin’ity tany ity no misy ny fasan’ny razanay.” Voararan’Andriamanitra, tsy mba nirehareha tamin’izany izahay, tsy mba nandalo ny eritreritray akory, kanefa izy ireo dia faly amin’izany. Olona hafahafa!
Lasan’eritreritra teo izy ka nanifikifika ny lohany sady nalahelo, naneno ny lakolosy teo amin’ny tendany ary nitresaka ilay zioga. Gaga Ilaimainty nijery ity namany:
– Io indray ianao sy ny adalanao! Mihinana, ry tsisy saina, mitomboa tavy, jereo ny tehezanao fa mivoaka avokoa; raha tsara ny mandinika, dia tsy ny omby mihitsy no hanao izany fa ny olombelona. Tsy mba nanana anjara tamin’izany isika!
Nijery ity namany Ilavenona sady niantra azy, nangarika izy ary niverina tamin’ny eritreriny.
– Mirehareha mafy izy ny amin’ny lasany feno voninahitra. Azy ny tanin’ny Kosovo, adin’ny Kosovo. Ah, odry, angaha moa tsy ny razambeko no nitarika ny sarety nisy ny sakafo sy ny fiadiana tamin’izany? Raha tsy nisy anay, dia ny olombelona no voatery hanao izany. Avy eo nisy ny tolona natao tamin’ny Tiorka. Ady lehibe, henin-kaja, henim-boninahitra, kanefa iza no tany tamin’izany? Ireto adala be sehoseho ireto, midoka tena eto alohako toy ny hoe izy no niady tamin’izany, iza no nitarika ny fikomiana? Indro, raiso ho ohatra ny tompoko. Izy koa dia midoka tena ery ny amin’ny fikomiana, indrindra satria ny dadan’ny raibeny lavo tanatin’ny tolom-pahafahana toy ny mahery fo. Ka ny tompoko ve no mendrika fiderana? Ny razambeny no afaka mirehareha, fa tsy izy; ny razambe no lavo mba hahafaka ny tompoko, izay taranany. Ka indro izy olona afaka, ahoana ary no ampiasainy ny fahafahany? Mangalatra ny hazon’olona izy, mipetraka ambony sarety, ary izaho no tsy maintsy mitarika azy sy ny hazony, izy kosa matory tsara. Izao izy nahalafo ny hazo ka misotro taoka, tsy manao na inona na inona kanefa mirehareha amin’ny lazan’ny lasa. Ary firy amin’ireo razambeko moa no novonoina ho faty tamin’ny fikomiana mba hamokisana ny mpiady? Ary tsy ny razambeko ve moa no tamin’izany no nitarika ny basy fiadiana, ny tafondro, ny sakafo sy ny bala? Izahay kosa anefa tsy mba midera tena amin’ny vitan’ireo satria tsy mba nisy fiovana ny fiainanay; izay ihany no ataonay ankehitriny, toy ireo razambenay, am-paharetana sy amin’ny fikaliana feno.
Faly ery ry zareo amin’ny fahorian’ny razambeny sy ny fanandevozana nandritra ny diman-jato taona. Izaho sy ny havako kosa nijaly nandritra ny fisinay manontolo, ary ankehitriny dia mbola miaina fahoriana sy fanandevozana hatrany izahay, tsy mba mitabataba ny amin’izany anefa izahay. Hoy ireo hoe nampijaly, namono ho faty ary nanombo azy ireo ny Tiorka; hay, ny razambeko novonoin’ny Tiorka sy ny Serbianina koa, nohanina sy nanaovana ny fampijaliana sy habibiana rehetra izao.
Mirehareha amin’ny fivavahany izy, kanefa zara raha mino. Inona no hadisoako sy ireo mitovy amiko no tsy mba azo ekena ho Kristiana izahay? Ny fivavahany milaza hoe “aza mangalatra”, jereo anefa ny tompoko mangalatra, sy misotro amin’ny vola azo avy tamin’ny halatra. Ny fivavahany mampianatra azy hitia ny mpiara-belona aminy, indro anefa izy ireo mifamono. Aminy, ny olona mendrika indrindra, ilay fitaratra halain-tahaka noho ny hatsaran-toetrany, dia ilay tsy mba manafitohina ny hafa, mazava ho azy fa tsy mba mandalo ny sain’izy ireo akory ny hoe hanao soa ny hafa ho fanampin’ny tsy fanafitohinana azy ireo. Hita tokoa ny fahambanian’ny toe-tsainany satria aminy ny fahamendrehana dia tsy misy afa-tsy ny tsy mandratra ny hafa fotsiny ihany.
Nisento lalina ilay omby, ary nitraka ny maso nandao ny vovoky ny lalana.
– Dia – nanohy ny dinidinika nanjombona ihany ilay omby – tamin’ity indray mitoraka ity kosa, tsy izaho sy ny mitovy amiko ve no tsara mihoatra lavitra azy ireo? Tsy mba namono olona aho, tsy mba nanaratsy olona, tsy mba nangalatra, na nandroaka olona tsy manan-tsiny tamin’ny raharaham-panjakana, tsy mba nanary ny volam-panjakana, tsy mba nisandoka bankirompitra, tsy mba namatotra na nampigadra olona tsy manan-tsiny, tsy mba nanendrikendrika ny namako, tsy mba nanohitra ny fitsipiky ny omby, tsy mba nanao fijoroana vavolombelona diso, tsy mba ministra ary tsy mba nanafitohina ny firenena, ary tsy hoe tsy nanao ratsy ihany aho, fa nanao soa tamin’ireo izay nanafitohina ahy koa. Ny reniko niteraka ahy, teo no eo dia nisy lehilahy maro naka ny nonon-dreniko izay tokony ho ahy. Mba nomen’Andriamanitra anay omby aza ny bozaka, fa tsy ho an’ny olona, dia mbola nanaisotra izany taminay ihany izy. Ary na dia teo aza ny kapoka maro samy hafa dia mbola nitarika ny saretin-draolombelona ihany izahay, niasa ny taniny ary nanome azy mofo hohanina. Tsy mba nisy nankasitraka anay tamin’izay nataonay…
– Na mifady hanina ohatra; eny e, ho an’olombelona dia ny fivavahana efa milaza ny fifadiana amin’ny andro fety, dia mbola tsy vonona ny hanao izay sorona kely izay ihany izy ireo, kanefa izaho sy ny namako nifady nandritra ny fiainanay manontolo, hatramin’ny nanasarahana anay tamin’ny nonon-dreny.
Niondrika toy ny feno fanahiana ilay omby, avy eo nitraka indray, nifofofofona teo toy ny nisy zavatra manan-danja be tsaroany tampoka, tsy nampandry ny sainy; tampoka teo, nitrena tam-pifaliana izy:
– Ahhh, fantako amin’izay, – hoy izy nieritreritra teo ihany, – izay no izy; mirehareha izy ireo satria manana zo amin’ny maha olom-pirenena sy olona afaka. Mila mandinika lalina kokoa aho.
Nieritreritra, nieritreritra teo ihany izy fa tsy nahity valiny.
– Inona ara izany zony izany? Raha teren’ny mpitandro filaminana hifidy izy, dia mifidy, izahay koa afaka manao toy izany, mitrena mafy hoe “tohanako!”. Ary raha tsy noterena izy, tsy nahasahy nifidy, na dia niditra tanaty politika akory aza, toa anay ihany. Izy ireo koa niaritra kapoka tany am-pigadrana, na dia tsy manan-tsiny aza. Izahay kosa mba mitrena sy manetsika ny rambonay, izy anefa tsy mba anana izany fahasahiana izany akory.
Tamin’izay fotoana izay, nivoaka avy tao amin’ny trano fisotroana ny tompony. Mamo, niraikiraiky, miteniteny foana, niezaka nanatona ilay sarety.
– Jereo kely ange ny fampiasan’ity taranaka mpirehareha ny fahafahana azony avy tamin’ny ran’ny razambeny ity e! Eny ara, ny tompoko dia mamolava sady mpangalatra, ahoana kosa no ampiasain’ny hafa ny fahafahany? Malaina fotsiny, dia maka ny deran’ny lasa sy ny mendrika tokony ho an’ny razambeny, kanefa izy zara raha nandray anjara tamin’izany toa ahy ihany. Ary izahay omby kosa, manao ny asa mafy hatrany, mpiasa mavitrika toy ireo razambenay ihany. omby izahay, kanefa afaka mirehareha amin’ny asa mafy vitanay sy ny fahamendrehanay ankehitriny.
Nisento lalina ilay omby ary naninjitra ny tendany hitondra ny zioga izy.
Tany Belgrade, 1902.